Izembatho ezijwayelekile zaseJalimane | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Alemania
Siyaqhubeka nomunye we imvunulo ejwayelekile emhlabeni. Lezo zingubo ezijwayelekile ezivame ukukhumbula izikhathi ezedlule lapho impucuko yakha amasiko abo futhi kwakungekho siko lomhlaba jikelele njengamanje. Ngenxa yalokhu kubumbana kwembulunga yonke, imininingwane esezingutsheni ezivela ezingxenyeni ezahlukahlukene zomhlaba itholakele, kulokhu ivela eGermany.
IJalimane linamasiko amahle Futhi njengase-Italy sithola nemvunulo ekhuthazwe yizikhathi ezedlule, njengezikhathi zasendulo. Endabeni yaseJalimane, imvunulo ejwayelekile iphefumulelwe ubuhle bendawo yasemakhaya, lapho kunikezwa khona izingubo zangempela.
1 Imvunulo ejwayelekile yabesifazane
2 Imvunulo ejwayelekile yamadoda
4 Imvunulo ejwayelekile yezingane
5 Izembatho e-Oktoberfest
Imvunulo ejwayelekile yabesifazane
El imvunulo ejwayelekile yabesifazane eJalimane ibizwa ngeDirndl, imvunulo eyavela ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye ezindaweni zasemakhaya. Lezi zingubo beziyisisekelo kepha kusuka ngo-1870 onxiwankulu baqala ukuzisebenzisa, ngakho-ke baba yimvunulo edumile futhi kwaba nezingubo zokugqoka eziphakeme. Okuphezulu kufaka i-bodice ne-corset. Imvamisa sibona ihembe ngamathoni amhlophe, yize ngaleso sikhathi izingubo zazidayiwe nangodayi bemvelo, okwadala amathoni athambile ehlobo futhi amnyama ebusika, anezimpawu eziyisisekelo. Ngakolunye uhlangothi, inesiketi eside semvelaphi. Namuhla siyasibona lesi siketi esinezikhindi ezihlukile, kuya ngokuthi umuntu ufuna ukusigqoka kanjani, kusuka eziketini ezingaphansi kwamadolo kuye kwezimfushane kakhulu. Yize uma sifuna ukwenza isudi ejwayelekile, lesi siketi kufanele sibe ubude beqakala.
La masudi abesifazane baphinde bagqoke iphinifa, ezingaboshwa ezindaweni ezahlukene. Khumbula ukuthi ngokwesiko ifindo linezincazelo ezithile. Uma igqokwa enkabeni kusho ukuthi owesifazane uyintombi nto, uma igqokwe emhlane ingumfelokazi, ngakwesokudla ngukuthi usebudlelwaneni kanti ngakwesobunxele kusho ukuthi akashadile.
Ungagqoka amasokisi futhi izicathulo zinesithende esibanzi esinamabhakede. Yize bebaningi abantu abagqoka ezimnyama, iqiniso ukuthi bajwayele ukugqoka ithoni yesudi, ukufanisa. Lezi zingubo zivame ukwenziwa ngelineni noma ukotini okuyiqiniso kakhulu, yize kulezi zinsuku nazo zenziwe nge-polyester. Kujwayelekile ukuthi abesifazane baphathe isikhwama semali, kanjalo namacici noma imigexo.
Imvunulo ejwayelekile yamadoda
Enye ye imvunulo ejwayelekile yale ndoda yaziwa ngokuthi yiLederhosen. Leli gama lisho amabhulukwe esikhumba, ayesetshenziswa ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX ukusebenza futhi njengezinye izingubo ezivela ensimini yilezo ezaba yimvunulo yesiko ngokuhamba kwesikhathi. Kunobude obuthathu obukhona lapho uthenga amabhulukwe. Ngaphezulu kwedolo, emadolweni nasemaqakaleni. Ibhulukwe lingaba nephakethe elilula ohlangothini lwesokudla futhi libe nemichilo kwesinye isikhathi efekethisiwe. Zigqokwe ngamahembe amhlophe noma amhlophe futhi ngamathoni acacile. Ngaphezu kwalokho, le ngubo ifaka amasokisi aminyene afinyelela emadolweni abizwa ngeStrumpshosen. I-Trantechut yisigqoko sendabuko esihambisana nale mvunulo, esenziwe ngokuzizwa futhi sineribhoni nenwele enkulu yezinwele sengathi ibhulashi.
Leli yigama elisetshenziselwa ukukhuluma ngesethi yemvunulo ejwayelekile, kokubili kwabesilisa nabesifazane. Lezi izingubo ezijwayelekile suka esifundeni saseBavaria, nokuyilapho kwaqala khona uhlelo lokuhlenga lolu hlobo lwamasudi.
Imvunulo ejwayelekile yezingane
Izingane nazo zigqoka izinhlobo ze- imvunulo ejwayelekile yabantu abadala. Imvamisa zinemibala eminingi futhi zinikela ngezinhlobonhlobo eziningi ukujabulela ukuzigqoka. Njengoba lezi zingubo ziphinde zagqokwa, maningi amaphathi asetshenziselwa ukugqoka kuwo wonke umndeni, kusuka ezinganeni ezincane kakhulu kuya kubantu abasha nakubantu abadala.
Lezi zimpahla ezijwayelekile sezibuye zaduma umhlaba wonke sibonga iqembu le-Oktoberfest. Le phathi yenzeka eMunich futhi kungumcimbi ohlanganisa izinkulungwane zabantu endaweni enkulu lapho ubhiya wobuciko kungabaphikisi abaphambili. Kukulo mkhosi lapho kubonakala khona ukwanda okukhulu kwezingubo ezijwayelekile zaseJalimane. Kujwayelekile ukubona amasudi asezingeni eliphakeme, anezindwangu zemvelo nokuqedwa okuphumelele kakhulu, kepha izinhlobo ezishibhe kakhulu ziyathengiswa nanamuhla, nge-polyester nezinto ezilula. Intsha nayo ivame ukugqoka uhlobo olufushane lwala masudi, abesifazane nabesilisa. Ngokuqondene nemibala, ijwayelekile ngesifunda, kepha lapho uya e-Oktoberfest kungenzeka ukubona zonke izinhlobo zamathoni nezinhlanganisela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Alemania » Izembatho ezijwayelekile zaseJalimane
ICala Mitjana, indawo ehlobo